Puntland oo dil ku xukuntay dhalinyaro katirsan Al-shabaab
Home Somali News Puntland Puntland oo dil ku xukuntay dhalinyaro katirsan Al-shabaab
Maxkamada Ciidamada qalbka sida ee gobolka bari, ayaa maanta xukun dil ah ku riday sadex dhalinyaro oo lagu soo eedeeyey inay ka mid ahaayeen ururka Al-shabaab, kadib markii maxkamadda horteeda ay ka qirteen inay ka mid ahaayeen Al-shabaab.
Gudoomiyaha Maxkamada darajada kowaad ee Ciidamada Gobolada Bari, Sanaag, Karkaar iyo haylaan C/fitaax Xaaji Aadan ayaa ku dhawaaqay xukunka dilka ah, isagoo sheegay in baaritaan dheer iyo eedeynta xeer ilaaliyaha markii Maxkamadu dhagaysatay ay ku riday xukunkan dilka ah, waxaana uu sheegay in maxkamadu dilka nimankan ay u cuskatay Kitaabka Quraanka kariimka ah iyo Xeerka ciqaabta Soomaaliyeed.
Xukunka intii aan lagu dhawaaqin ayaa maxkamada dhagaysatay xeer iaalinta oo dacwadda kusoo oogtay eedaysayaasha, waxaana xeer iaalintu ay sheegtay in lagu soo qabtay howlgalo ay ciidamada Puntland ka sameeyeen magaalada Bosaso.
Dhalinyaran ayaa waxa ay Magacyadooda kala yihiin:-
1-Cali Maxamuud Cilmi (19 sanno jir) ”Ina Mako”.
2-Cabdirisaaq Maxamed Shiikh Axmed (18 sanno jir) ”Ina Duniyo Isaaq”.
3-Aadan Maxamed Nuur (19 sanno jir) ”Ina Isniino Aadan”.
Sadexda eedaysane ayaa dhankooda fursad loo siiyay inay ka jawaabaan dacwadda ay xeer ilaalintu kusoo oogtay, waxaana ay eedaysanayashu ay qirteen inay ka mid ahaayeen Al-shaabab.
Waa markii sadexaad oo Maxkamada Ciidamada Qalabka sida ee Puntland ay xukun dil ah ku rido dad lagu eedeyey in ay ka tirsanyihiin kooxda Shabaab sanadkan gudihiis, kuwaasoo la doonayo in qofkii sheegta ama taageera Kooxdaas uu isagana Xukun Caynkan oo kale ah lagu Fulinayo.
Maxkamadaha Puntland ayaa todobaadkii lasoo dhaafay xukun dil ah ku riday 6 qof oo loo soo qabtay dilka AUN Dr. Axmed Xaaji C/raxmaan , kuwaasi oo kamid ahaa kooxdii dilka fududeysay, walow aan weli lasoo qaban xubnihii dilka gacantooda ka geystay. Dadka ay maxkamada xukuntay ayaa waxaa ku jiray xubnihii baxsaday ee dilka fuliyey iyo Waliba hogaamiyaha Al Shabaab, Axmed Godane.